Abaphumelele iMatrox Monarch HD kwiKlasi ePhakamileyo kwiDyunivesithi yaseMantla eFlorida | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » Abaphumelele iMatrox Monarch HD kwiKlasi ePhakamileyo kwiDyunivesithi yaseMantla eFlorida
IYunivesithi yaseNyakatho yeFlorida iphakamisa i-Monarch ehambelanayo, elula ukuyisebenzisa HD Isikhowudi sokurekhoda izifundo zomgama kunye nemisitho yokuqalisa komjelo
Zimbalwa iziganeko kumava omfundi waseyunivesithi ekulindeleke kakhulu kunombhiyozo wabo wokuthweswa isidanga. Kubafundi abaphumeleleyo, akukho nto ifana nokufumana idiploma kwaye uphonsa ibhodi yakho yokubhiyozela ukubhiyozela ukuphela kwexesha lokufunda, ukuhlala ubusuku bonke ufunda, kunye nokwenza iinkumbulo nabahlobo. Ngelixa abafundi beDyunivesithi yaseMantla eFlorida (UNF) besebenza ngokungakhathali ukuze bakwazi ukuhamba kwinqanaba ngeentsuku zokuthweswa izidanga, iMonro yeMatrox® HD Iscoder sisebenza nzima nje ukubaxhasa emfihlekweni ukuze babonelele ngokurekhodwa kumgangatho ophezulu weentetho zabo kunye nemisinga ephilayo yemisitho yabo yokuqalisa.
Kubekwe kwindawo yolondolozo lwendalo eJacksonville, eFlorida, i-UNF inama-53 abafundi abenza isidanga sokuqala, izidanga ezingama-28, kunye neenkqubo ezisixhenxe zobugqirha ezilungelelaniswe zaba ziikholeji ezahlukeneyo zemfundo, kunye neeklabhu zabafundi ezisebenzayo, imibutho kunye nenkqubo yezemidlalo ephumeleleyo. Kwiyunivesithi, ukukwazi ukubonelela ngamathuba okufunda umgama kunye nokusasaza umsitho wabo wokuqalisa kwabo bangakwaziyo ukuya kuwo yayingamanyathelo endalo alandelayo ekwandiseni ukufikelela kweyunivesithi. Ukufezekisa ezi njongo, iyunivesithi kufuneka ifumane isixhobo sokufaka iikhowudi esiya kuthi sihambelane ngokwaneleyo ukuhambisa apho kufuneka khona, ngelixa sivelisa umgangatho wobungcali, ividiyo efakwe kwi-H.264 yokurekhodwa kunye nemijelo ephilayo.
Ukugaya kuphela ezona zilungileyo
Xa wayecelwa okokuqala ukuba ayile indawo yokufunda umgama ye-UNF, itekhnoloji yobuchwephesha kwezosasazo eyunivesithi, u-Elaine Poppell waguqukela kuMatrox. Kwiminyaka kamva, xa wayefuna isisombululo esiphathwayo, esiguquguqukayo kunye nesisombululo sokurekhoda kwimisitho yokuqalisa, umsebenzisi wexesha elide wevidiyo kaMatrox kunye nemveliso yemizobo yenzeke kwividiyo yeYouTube ene-Monarch. HD. "Ndiyazi ukuba kufuneka sibe nale mveliso," watsho. “Ndijonge yonke into eyayikhona ngelo xesha, kodwa yayiyi-Monarch HD eyona ibalaseleyo kunenye. ” Phakathi koKumkani HDAmandla okusasaza kunye nokurekhoda izigqibo ukuya kuthi ga kwi-1080p30 kunye ne-robust, compact form factor, ukhetho lwalucacile.
Indawo yokufundela umgama ye-UNF ngoku ibandakanya igumbi lokufundela elinikezelweyo elineekhamera ze-PTZ, izixhobo zosasazo, kunye nesoftware yokubamba isifundo kunye nezixhobo zokusebenza-kubandakanya i-Monarch HD isixhobo sokuhambisa kunye nokurekhoda- esongezwe kuseto.
Ukuxhasa abafundi ngevidiyo
I-UNF idale imeko-bume yevidiyo eyonyusa amava abafundi ukusukela ekuqaleni kwemisebenzi yabo yaseyunivesithi kude kube lusuku lwabo lokugqibela kumsitho wokuqalisa. Ukurekhoda iiklasi zokufunda umgama, phakathi kweekhamera ezimbini kunye ezintathu ze-SDI ezimiselweyo zijikeleze iholo yokufundela. Ngexesha leklasi, iikhamera zithatha ividiyo kwaye ziyithumele kwiswitshi, ngeli xesha iaudiyo ebanjwe ziimakrofoni ithunyelwa kumxube wokumamela. Oku kutya kuthunyelwa kuKumkani HD encoder. Nje ukuba irekhodwe kwi-960x540p yi-Monarch HD, iifayile zilayishwe kwinkqubo yolawulo yokufunda yokufunda ekhethwe yi-UNF (LMS), Canvas, ukuze abafundi bazijonge ngokulula kwabo.
Ngeemveliso ezinkulu, ezinje ngemibhiyozo yokuqalisa kweyunivesithi, kumiselwe iikhamera ezintlanu ze-SDI ukugubungela umbono wabaphulaphuli, inqanaba, izithethi kunye nokunye. Ividiyo evela kwiikhamera ithunyelwa kumxube wevidiyo, ethi yona ithumele ukutya kwiindawo ezininzi, kubandakanya ne-Monarch HD kunye nejumbotron kumsitho. Ividiyo ityiswe uMonarch HD isasazwa kwi-720x480p nakwi-1,200 Mbps- isebenzisa i-RTMP- ukufumanisa iqonga lokusasaza ividiyo yeArcas, apho abahlobo kunye nosapho babafundi banokuthi babukele khona umsitho obukhoma.
Isixhobo sokuhambisa kunye nokurekhoda esifanelwe yimbeko ephezulu
Monarch HD ngokungathandabuzekiyo ikhusele indawo yayo phezulu kwiklasi yayo, ivumele i-UNF ukuba ibonelele ngokulula nangokufikelelekayo ngokubonelela ngevidiyo ekumgangatho ophezulu wokuhambisa kunye nokusasaza imithendeleko yayo yokuqalisa ngexesha lokwenyani. Icompact yesixhobo, into ephathekayo yefomathi kunye nophawu lweMatrox oluthembekileyo luvela nje zizizathu ezimbalwa kuluhlu lukaPoppell lokuba kutheni Inkosi HD kukusasaza kunye nokurekhoda isixhobo. Nditsho nakwizigqibo ezisezantsi, iividiyo ezirekhodwe kunye neKumkani HD ziyamangalisa, utshilo. “IKumkani HD yenza yonke imveliso ibe mpuluswa. Ndiyazi ukuba ndingathembela kuMatrox ngalo lonke ixesha! ”
Unxibelelwano lweMedia yeMatrox
Izithuba zamva kwexesha nguMnxibelelanisi weMidiya (ndinibone nonke)
I-Metus kunye neQela leVidiyo yeMatrox ukuya kuthi ga kwi-Multi-Channel XAVC, ukuSebenza ngokuPhuma kweMveliso - Oktobha 19, 2020
Abaphumelele iMatrox Monarch HD kwiKlasi ePhakamileyo kwiDyunivesithi yaseMantla eFlorida - Oktobha 15, 2020
I-QuadHead2Go yokulawula abalawuli abaninzi kunye ne-ChyronHego I-PRIME Iindonga zeVidiyo yeqonga zenza ukuba abaqulunqi babeke imiboniso emikhulu kunye nokuyila kwemveliso ye-studio emangalisayo - Oktobha 4, 2020
UMonarch HD irekhodi stream 2020-10-15
Previous: Umhleli weMncedisi we-Avid
next: Umsebenzi we-HPA wokuBuyisa amaQela oSebenzayo oMiselweyo kunye neePaneli kwiiHolo eziDibeneyo zeDolophu